Carruuraha soomaalida Noorweey oo qeyb ka ah fal dambiyeedyadda ka dhaca | Somaliska
Hey’ad tirro koobka sameeysa ee dalkaasi Noorweey lana yiraahdo SSB, ayaa tirro koobyo la xirriira falal dambiyeedyada ay soo galootiga dalkaasi geeystaan soo saaray iyadoo u kala qaaday qeybo kala duwan.
Hey’adan ayaa sheegtay in carruuraha ay soo galootiga dhalaan ay yihiin kuwa ugu badan ee geeysta fal dambiyeedyada dalkaasi ka dhaca. Warbixintan oo shalay la soo bandhigay ayaa 49% (afaran iyo sagaal boqolkiiba) waxaa lugu sheegay in dadka dhawaan soo galay ama soo galootiga loo yaqaan ee dambiyada gala ka badan yihiin kuwa dalkaasi ku dhasha. Carruuraha ay dhalaan soo galootigaa ee dambiyada geeysta ay ka badan yihiin 151% (konton iyo kow boqolkiiba) kuwa wadanka ku dhasha.
Dadka soo galootiga ah ee ay warbxintani sheegeeyso ayaa ah dadyowga ka soo kala jeeda qaaradaha Afrika iyo Aasiya. Waxaana ay dadyoowgaasi iyo carruurahooduba ka kala yimaadeen dalalka Soomaaliya, Ciraaq, Afgaanistaan iyo Iiraan.
Dhinaca kale haweeneyda uga ah wasiirada socdaalka ee dalkaasi Inger Støjberg ayaa codsaday in baaritaanka iyo tirro koobka si toos ah loogu qeexo dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan shaqsiyaadka soo galootiga ah ee falal dabiyeedyada geeysta. Haweeneydan oo afkaarkeedu ay dhinaca middig u jan jeerto islamarkaasina caan ku ah siyaasad qalifsan ayaa sheegtay in ay wax lala yaabo tahay dad nabagalyo u soo raadsaday dalkeeda oo fursado helay ay dambiyo geestaan. Waxaana waajib ah ayey tiri in dadka dalkaasi soo gala ay u hogaansaman sharciga dalkaasi u yaala. Ugu dambeyntiina waxaa mudooyinkii ugu dambeeyey aad isku soo tarayey falalka ay geeystaan dadka ajaanibta ah gaar ahaan soomaalida.
waxaa u fiican qofkii xumaan la yimaada wadankooda iney celiyaan oo sharcigana kaqaataan waayo waxay danbiga uu ka galayo dadka wanaajiyey oo soo dhaweeyey oo ufuliyey wuxuu wadankiisa ka waayey walalhay waa yaab intuu umahad celinlahaa maaha inuu ku kibro